रेलमा काटिएकी दुई किशोरीको यस्तो रहस्य ! « Janata Samachar
रेलमा काटिएकी दुई किशोरीको यस्तो रहस्य !
प्रकाशित मिति : 11 February, 2019 2:18 pm
काठमाडौं । आइतबार रहस्यमय घटना सार्वजनिक भयो । सामान्य अर्थमा बुझ्दा रेलको लिकमा काटिएर दुई किशोरीको मृत्यु भयो । अहिले आएर घटनाले फरक मोड लिएको छ । ती किशोरी नेपाली मुलकी हुन् । सीमावर्ती शहर रक्सौलको दक्षिणी गाउँमा अवस्थित रेल्वे लिकमा मृत भेटिएका दुई नेपाली किशोरीको कोठामा ‘सुसाइड नोट’ भेटिएको छ ।
प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानका क्रममा उनीहरु बस्ने डेराबाट ‘सुसाइड नोट’ फेला पारेको हो । पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका–२ भेडिहारी बस्ने निभाकुमारी साह र सोही गाउँपालिका–३ हरिहरपुर बस्ने किरण चौरसियाको शव रेलको लिकमा क्षत विक्षत अवस्थामा फेला परेको थियो । उनीहरु दुबैजना कक्षा ११ मा पढ्थे । घटनाको अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरीले उनीहरुको मृत्युको बिषयमा केही बोलेको छैन ।
‘सुसाइड नोट’ भेटिएपछि उनीहरुले स्वईच्छाले मृत्युवरण गरेको प्रहरी बताउँछ । तर, प्रहरीको आधिकारिक र अन्तिम निर्णय भने यो होईन । मृतक किशोरीका आफन्तले तिनीहरु त्यहाँ कसरी पुगे भन्ने बिषय शंकास्पद रहेको बताएका छन् । रक्सौलबाट दुई किलोमिटर दक्षिणको गाउँमा उनीहरु किन र कसरी गए भन्नेबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा रक्सौलबाट दिल्ली जाँदै गरेको १५२७३ नम्बरको सत्याग्रह एक्सप्रेस रेलले उनीहरुलाई किचेको थियो । घटनास्थलबाट भारतीय प्रहरीले फेला पारेको फुटेको मोबाइल र निभा कुमारीको वीरगञ्ज पब्लिक स्कुलको कक्षा ११ को आइडी कार्डका आधारमा उनीहरुको सनाखत भएको थियो । कक्षा ११ मा पढ्ने किरण चौरसियाको विवाहका लागि भर्खरै फूलमाला भएको थियो । कोठामा भेटिएको ‘सुसाईट नोट’ माथि किरणले इन्गेजमेन्टमा पाएको घडी र प्लाष्टिकको फूलसमेत राखेकी थिइन् । किरणको केही दिन पहिलेमात्रै विवाहको मिति समेत तय भइसकेको थियो । चौरसिया परिवारलाई केटापक्षले तीन दिन पहिले नै दाइजो स्वरुप ४ लाख रुपैयाँसमेत बुझाइसकेको स्थानीयको दाबी छ ।
‘सुसाइड नोट’मा उनीहरुले मृत्युको जिम्मेवार कोही नभएको लेखेकी छन् । रातो अक्षरले लेखिएको नोटमा आफू बाँच्नुको कुनै अर्थ नभएको लेखिएको छ । माता–पिता हामीले केही गर्न सकेनौ । जीवनमा गर्नुपर्ने धेरै थियो तर अपूरै रह्यो भनिएको छ । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार डेराबाट उनीहरु आइतबार बिहान साढे ६ बजेतिर एकैसाथ निस्केका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले मंगलबार साहलाई पक्राउ गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्र काटेको हो